Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny biogas | Green Renewable
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny biogas
Misy loharano angovo azo havaozina marobe ankoatry ny fantatsika hoe rivotra, masoandro, geothermal, hydraulic, sns. Androany isika dia hanao famakafakana sy hianatra momba loharanom-angovo azo havaozina, angamba tsy dia fantatry ny besinimaro, fa manana hery lehibe. Momba ny biogas.
Biogas dia gazy mahery nalaina avy tamin'ny fako biolojika. Ho fanampin'ireo tombony be dia be ao aminy dia endrika angovo madio sy azo havaozina izy io. Te hahafantatra bebe kokoa momba ny biogas ve ianao?
1 Toetra mampiavaka ny biogas
2 Ahoana ny fomba famokarana biogas
3 Angovo mety
4 Tantaran'i Biogas
5 Inona avy ireo biodigesters?
6 Fampiharana biogas anio
Toetra mampiavaka ny biogas
Biogas dia gazy iray ateraky ny tontolo voajanahary na amin'ny fitaovana manokana. Izy io dia vokatry ny fanehoan-kevitra biodegradation amin'ny zavatra biolojika. Matetika izy ireo dia novokarina tany amin'ny fanariam-pako satria simba avokoa ny zava-maniry voajanahary. Rehefa voalaza fa miharihary amin'ireo maso ivelany ny zavatra biolojika, ny asan'ny zavamiaina bitika toy ny bakteria methanogenika (bakteria miseho rehefa tsy misy oksizena sy mihinana entona metana) ary ireo antony hafa manimba azy.
Amin'ireto tontolo iainana tsy misy ôksizena ireto ary ireo bakteria ireo dia mihinana zavatra biolojika, ny vokariny dia gas methane sy CO2. Noho izany, ny firafitry ny biogas dia fifangaroana misy 40% sy metana 70% ary ny sisa amin'ny CO2. Izy io koa dia misy ampahany kely amin'ny gazy toy ny hidrogen (H2), ny azota (N2), ny oxygen (O2) ary ny hydrogen sulfide (H2S), saingy tsy fototra izy ireo.
Ahoana ny fomba famokarana biogas
Ny biogas dia novokarin'ny decomposition anaerobic ary tena ilaina amin'ny fitsaboana ny fako biodegradable, satria mamokatra solika avo lenta ary miteraka effluent azo ampiharina ho toy ny mpamono tany na zezika marobe.
Miaraka amin'ity entona ity ny herinaratra dia mety hiteraka amin'ny fomba maro samihafa. Ny voalohany dia ny fampiasana turbine hivezivezy entona sy hiteraka herinaratra. Ny iray hafa dia ny fampiasana entona hamokarana hafanana amin'ny lafaoro, fatana, fanamainana, koba na rafitra fandoroana hafa izay mitaky entona.
Satria vokarin'ny vokatra organika maloto izy io dia raisina ho karazana angovo azo havaozina izay afaka manolo solika fôsily. Amin'izany dia azonao atao koa ny mahazo angovo amin'ny fandrahoana sakafo sy ny fanafanana tahaka ny gazy voajanahary miasa. Toy izany koa, ny biogas dia mifamatotra amin'ny mpamorona herinaratra ary mamorona herinaratra amin'ny alàlan'ny motera fandoroana anaty.
Fitrandrahana biogas amin'ny fanariam-pako
Ka azo lazaina fa manana tanjaka ny biogas satria manolo ny solika fôsily dia satria tena mila manana angovo lehibe. Miaraka amin'ny biogas metatra toratelo afaka mamokatra hazavana hatramin'ny 6 ora izy io. Ny jiro vokarina dia mety hahatratra ny mitovy amin'ny jirony 60 watt. Azonao atao ihany koa ny mihodina vata fampangatsiahana metatra toratelo mandritra ny adiny iray, incubator mandritra ny 30 minitra, ary motera HP mandritra ny 2 ora.
Noho izany dia dinihina ny biogas gazy mahery manana tanjaka angovo tsy mampino.
Ny fiantsoana voalohany azo jerena momba an'ity gazy ity dia tamin'ny taona 1600, raha nisy mpahay siansa maro nilaza fa io gazy io dia iray avy amin'ny famoahana ny zavatra biolojika.
Nandritra ny taona maro, tamin'ny 1890, naorina izy io ny biodigester voalohany hamokarana biogas ary tany India izy io. Tamin'ny jiro 1896 tany Exeter, Angletera, dia naterin'ny entona voaangona avy amin'ny mpandevina nandoto ny fotaka avy tao amin'ireo tatatra ao an-tanàna.
Rehefa nifarana ny ady lehibe roa, dia nanomboka niely tany Eoropa ireo ozinina mpamokatra biogas. Amin'ireny ozinina ireny dia noforonina ny biogas mba hampiasaina amin'ny fiara tamin'izany. Ny fiara mifono vy Imhoff dia fantatra ho toy ny mahavita mitsabo rano maloto sy manondraka zavatra biolojika hamokarana biogas. Ny entona namboarina dia nampiasaina hampiasana ny zavamaniry, ho an'ny fiaran'ny tanàna ary any amin'ny tanàna sasany dia nampidirina tao anaty tamba-jotra.
Fanaparitahana biogas dia voasakana noho ny fidirana mora sy ny fanatanterahana ny solika fôsily ary, taorian'ny krizy angovo tamin'ny taona 70, natomboka indray ny fikarohana sy ny fampandrosoana biogas any amin'ny firenena rehetra manerantany, mifantoka kokoa amin'ny firenena amerikanina latina.
Nandritra ny 20 taona lasa, ny fivoaran'ny biogas dia nahazo fandrosoana manan-danja marobe noho ny zavatra hita momba ny fizotran'ny biolojika sy biokimika izay miasa ao aminy ary noho ny fanadihadiana ny fihetsiky ny zavamiaina bitika izay miditra an-tsehatra amin'ny toe-piainana anaerobika.
Inona avy ireo biodigesters?
Ny biodigesters dia karazana kaontenera mihidy, hermetika ary tantera-drano izay apetraka ny zavatra biolojika ary avela lo sy mamokatra biogas. Ny biodigester tsy maintsy hikatona sy hermetika hahafahan'ny bakteria anaerobika mihetsika sy manimba ny zavatra voajanahary. Ny bakteria methanogenika dia maniry fotsiny amin'ny tontolo izay tsy misy oxygen.
Manana refy ireo reaktor ireo mihoatra ny 1.000 metatra toratelo misy ny fahaizany ary miasa amin'ny toetry ny mari-pana mesophilic (eo anelanelan'ny 20 sy 40 degre) sy ny thermophilic (mihoatra ny 40 degre).
Ny biogas dia nalaina avy tamin'ny fanariam-pako izay, rehefa feno sy mihidy ireo sosona organika, dia misy ny tontolo tsy misy oksizena izay anaovan'ny bakteria methanogenika ny zavatra voajanahary ary miteraka biogas izay alaina amin'ny fantsom-pitantanana.
Ny tombony ananan'ny biodigesters mihoatra ny fotodrafitrasa famokarana herinaratra hafa dia ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana ambany ary tsy mila mpiasa mahay. Ho fanampin'izany, ho vokatra-vokarin'ny fihenan'ny zavatra biolojika, azo zahana ny zezika biolojika izay ampiasaina indray mba hamboly voly amin'ny fambolena.
I Alemana, Sina ary India dia sasany amin'ireo firenena mpisava lalana amin'ny fampidirana an'ity karazana teknolojia ity. Any Amerika Latina, Brezila, Arzantina, Orogoay ary Bolivia dia naneho fivoarana lehibe tamin'ny fampidirana azy ireo.
Fampiharana biogas anio
Any Amerika Latina, ny biogas dia ampiasaina hitsaboana fitoniana any Arzantina. Ny stillage dia ny sisa tavela amin'ny famokarana fary fary ary amin'ny toetran'ny anaerobika dia simba izy io ary miteraka biogas.
Ny isan'ny biodigesters eto amin'izao tontolo izao dia mbola tsy voafaritra loatra. Any Eropa dia tsy misy afa-tsy biodigesters 130. Na izany aza, io dia miasa toy ny sahan'ny angovo azo havaozina hafa toy ny masoandro sy rivotra, izany hoe, rehefa hita sy mivoatra ny teknolojia, mihena ny vidin'ny famokarana ary mihatsara ny fahatokisan'ny taranaka biogas. Noho izany dia inoana fa hanana sehatra fampandrosoana marobe izy ireo amin'ny ho avy.
Ny fampiharana ny biogas any ambanivohitra dia tena zava-dehibe. Ny voalohany dia namokatra zezika angovo sy zezika ho an'ny tantsaha amin'ny faritra marginal izay tsy dia be karama sy sarotra idirana amin'ny loharanon-kery mahazatra.
Ho an'ny faritra ambanivohitra dia novolavolaina ny teknolojia izay mikasa ny hahatratra ireo mpandevon-kanina misy vidiny faran'izay kely ary mora ny miasa. Ny angovo tokony hamokarana dia tsy betsaka amin'ny faritra an-tanàn-dehibe, noho izany tsy dia misy fepetra loatra fa avo ny fahombiazany.
Faritra iray hafa ampiasana biogas ankehitriny Ao amin'ny sehatry ny fambolena sy ny agro-indostrialy io. Ny tanjon'ny biogas amin'ireto sehatra ireto dia ny hanomezana angovo sy hamahana ireo olana goavana ateraky ny fandotoana. Miaraka amin'ny biodigesters dia azo fehezina tsara kokoa ny fandotoana ireo zavatra voajanahary. Ireo biodigester ireo dia manana fahombiazana bebe kokoa ary ny fampiharana azy ireo, ankoatry ny fananana vidiny voalohany dia manana rafitra fikirakirana sy fikirakirana sarotra kokoa.
Ny fandrosoana farany teo amin'ny fitaovam-pandrefesana dia mamela ny fampiasana mahomby kokoa ny gazy vokarina ary ny fandrosoana mitohy amin'ny teknika fanamasinana dia miantoka fampandrosoana maharitra amin'ity sehatra ity.
Rehefa ampidirina io karazana haitao io dia tsy maintsy atao ny mamoaka ireo vokatra any amin'ny tambazotran'ireo tatatra amin'ireo tanàn-dehibe dia voajanahary fotsiny. Raha tsy izany dia mety hisy fiantraikany amin'ny fiasan'ny mpandevina ary ho sarotra ny famokarana biogas. Nitranga izany tany amin'ny firenena maro ary nilaozana ny biodigesters.
Ny fanao tena miely patrana eran'izao tontolo izao dia ny fanariam-pako fanadiovana. Ny tanjon'ity fampiharana ity dia ny fanesorana ireo fako marobe ateraky ny tanàn-dehibe ary miaraka amin'izany, amin'ny teknika maoderina, azo atao ny mamoaka sy manadio ny gazy methane izay ateraka ary am-polony taona maro lasa izay dia niteraka olana lehibe izany. Olana toy ny fahafatesan'ny zava-maniry teny amin'ny faritra akaikin'ny hopitaly, fofona mavesatra ary mety hipoaka.
Ny fandrosoan'ny teknikan'ny fitrandrahana biogas dia nahafahan'ny tanàna maro eran'izao tontolo izao, toa an'i Santiago de Chile, nampiasa biogas amin'ny maha loharanom-pahefana ao amin'ny tamba-jotra fizarana gazy voajanahary any afovoan-tanàna.
Biogas dia manana fanantenana lehibe amin'ny ho avy, satria angovo azo havaozina sy madio izay manampy amin'ny fanalefahana ny olana amin'ny fandotoana sy ny fako. Ho fanampin'izany, mandray anjara tsara amin'ny fambolena izy io, manome zezika biolojika vita amin'ny vokatra azo avy amin'ny vokatra izay manampy amin'ny tsingerin'ny fiainana ireo vokatra sy ny fahavokisan'ny vokatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Biofuel » biogaz » Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny biogas
Ec. Jorge Bussi dia hoy izy:
Mikaroka momba ny fanaovana biodigester aho.
Miasa amin'ny toeram-piompiana kisoa manana loha 8000, mila orinasa manana traikefa amin'ny fananganana biodigesters aho.
Mamaly an'i Ec. Jorge Bussi
Ny World End Vault dia ao Svalbard